Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Emirà Arabo Mitambatra sy Vaovao momba ny fizahan-tany » COVID tsy mampiato ny fandraisan'anjara eran-tany amin'ny tsenan'ny dia lavitra
Tsena enina enina amby enimpolo sy tsena ivelany no misolo tena azy manokana ao amin'ny tsena fitsangatsanganana arabo, ao anatin'izany i Jordania, KSA, Alemana, Italia, Russia, Greece, Thailand, Malaysia, Maldives, ary Sipra amin'ity taona ity.
Na eo aza ny fameperana ny fitsidihan'ny coronavirus, firenena manerantany no manao sonia ny tsenan'ny Arabian Travel izay kasaina hatao amin'ny volana ambony.
Toerana maro mandray anjara amin'ny ATM amin'ity taona ity, no manantena ny hisarika ny mpitsidika GCC amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
Ny lohahevitry ny seho amin'ity taona ity dia ny "maraina vaovao ho an'ny dia sy fizahan-tany", ary ny sain'ny besinimaro dia hifantoka amin'ny vaovao farany COVID manerantany.
Tamin'ny faha-28 taonany izao, ny fampirantiana fizahan-tany sy fizahan-tany lehibe indrindra any amin'ny faritra, ny Arabian Travel Market (ATM), dia nahasarika mpampiranty lehibe avy amin'ny tsena anatiny sy ivelany toa ny Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Jordania, UK, Sina, Alemana, Rosia, Gresy , Egypt, Sipra, Indonezia, Malezia, Singapore, Maldives, Filipina, Thailand, ary Etazonia.
Firenena 62 no hisolo tena ny fampirantiana amin'ity taona ity ao amin'ny Tsena fitsangatsanganana arabo (ATM) 2021, izay atao manokana ao amin'ny Dubai World Trade Center (DWTC) ny alahady 16 mey hatramin'ny alarobia 19 mey 2021.
"Ity dia valinteny mahavariana avy amin'ny fikambananan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny sehatry ny fizahan-tany rehetra, noho ny famerana ny fivezivezena isan-karazany manerantany, ary manome tosika lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any Moyen Orient," hoy ny fanamarihana nataon'i Danielle Curtis, talen'ny fampirantiana Moyen Orient , Tsena fitsangatsanganana arabo.